Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ọpụpụ nbibi obodo nwere ike kwụọ ụgwọ mkpirisi ndị njem azụmahịa?
Nnyocha ahụ na-egosi na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-eme atụmatụ njem mba ofesi na 2022 chọrọ ịde akwụkwọ ezumike obodo ga-anabata bọọdụ ndị njem nlegharị anya, agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ngalaba ụgbọ elu - ndị na-eme ezumike na-achọsi ike imezi oge furu efu, na ọtụtụ echekwala ego zuru oke. ide akwụkwọ ụzọ abụọ ma ọ bụ karịa n'ime afọ.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị Britain na-eme atụmatụ ezumike esenidụt 2022 chọrọ ịde akwụkwọ ezumike obodo, na-ekpughe nyocha ewepụtara taa (Monday 1 Nọvemba) nke WTM London, onye isi ihe omume zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ njem.
Akwụkwọ akụkọ WTM Industry Report, ntuli aka nke ndị na-azụ ahịa 1,000, chọpụtara na 648 na-eme atụmatụ ime ezumike esenidụt na 2022 - na obodo bụ nhọrọ nke abụọ kachasị ewu ewu, mgbe nhọrọ kachasị amasị nke osimiri.
Nchọpụta ahụ na 30% chọrọ ezumike obodo n'afọ na-abịa ga-abịa dị ka agbam ume nye ndị na-anya ụgbọ elu na ndị na-anya ụgbọ elu n'ofe Europe, bụ ndị dara ada nke ukwuu na njem azụmahịa na ihe omume n'etiti ọrịa a.
Òtù Na-ahụ Maka Njem Azụmahịa na-eme atụmatụ na, n'ime afọ nkịtị, £ 220 na-agbakwụnye na UK GDP, ekele maka njem njem azụmahịa sitere na UK.
Otu a kwuru na enwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njem azụmahịa nde itoolu sitere na UK na 2019, na-akpata ihe dị ka nde 50 nọrọ abalị - ihe karịrị ọkara na-erughị abalị atọ.
Ọzọkwa, ndị njem azụmahịa na-aza 15-20% nke ndị ahịa ụgbọ elu na, n'ụzọ ụfọdụ, ha na-erite uru okpukpu abụọ ka ndị njem ntụrụndụ.
Agbanyeghị, ụlọ ọrụ na-ahụ maka njem ahụla mbelata ego ha nwetara n'oge ọrịa na-efe efe ruru 90%.
Dabere na Tourism Economics, ụlọ ọrụ Oxford Economics, oria ojoo a emetụtala ebe ndị obodo na-aga, n'otu akụkụ n'ihi mbelata njem azụmahịa na mmemme.
Ọzọkwa, ndị na-ebu amụma na-ekwu na mgbake njem azụmahịa ga-adaghachi azụ azụ azụ ntụrụndụ.
N'ebe ọzọ, Financial Times kọrọ otú bọọdụ ndị njem na ndị na-eri nri na Europe na-etinyekwu ego n'ahịa okomoko iji gbapụ na ndabere ha na ụdị anyanwụ-aja na oke osimiri - omume nke ga-enyekwara aka ịkwanye etiti obodo. ọdịda nke ndị ahịa njem azụmahịa.
Ememe ezumike n'ụsọ osimiri ga-anọgide na-achọsi ike - dị ka nchoputa sitere na akụkọ WTM London na-egosi - mana nkwụsịtụ obodo na-enye ohere maka ụdọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ịbanye n'ọchịchọ ọrịa na-efe efe nke ndị na-azụ ahịa na-etinye aka na mgbapụ dị oke ọnụ ma mefuo ego ha na-echekwa na sekọnd ma ọ bụ ezumike nke atọ n'oge 2022.
Usoro a nwekwara ike bụrụ mgbanwe ogologo oge, dịka nyocha Bloomberg na-atụ aro na ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu na-eme atụmatụ imefu obere ego na njem mgbe ọrịa ahụ gasịrị - ngwaọrụ nkwurịta okwu n'ịntanetị, nchekwa ego na nkwado nkwado niile pụtara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụgbọ elu nwere ike ịnwe. dabere na ndị njem ụlọ ọrụ ole na ole n'ọdịnihu karịa ka ha mere tupu Covid-19.
Simon Press, Onye isi ihe ngosi WTM London, kwuru, sị: “Ntụrụndụ nke mgbochi njem n'ọnwa Ọktọba enyela ndị niile nwere ike ịga njem n'ofe UK agbamume - mana, ka njem azụmahịa na-adị ka ọ ga-abụ nke emeri na 2022, ahịa ntụrụndụ ga-adị mkpa iji nyere aka. kwụọ ụgwọ maka mkpirisi ahụ.
"Nnyocha anyị na-egosi na otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ndị na-eme atụmatụ njem mba ofesi na 2022 chọrọ ịde akwụkwọ ezumike obodo ga-anabata bọọdụ ndị njem, agbụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ngalaba ụgbọ elu - ndị na-eme ezumike na-achọsi ike imezi oge efu, na ọtụtụ ndị echekwala nke ọma. ego ka akwụkwọ abụọ ma ọ bụ karịa getaways na afọ.
"Ọtụtụ n'ime ha na-enwekwa obi ụtọ ịkwalite maka ahụmịhe okomoko, nke a na-agaghị echefu echefu - nke ga-enye ohere maka ndị nọ na ngalaba ile ọbịa ka ha bụrụ ndị ọhụrụ na ahịa ha na iji nwetaghachi ego ọhụrụ."